Home | Rakhine Lives Matter
Rakhine Lives Matter Welcomes You
What is happening in Rakhine State, Burma?
🌸သားကောင်🌸 🚦🚥 ဇာတ်လမ်းတိုအမှတ်စဉ် - ၅ 🎥 ကိုလင်း နှင့်ညီအကိုများမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ 🌷ပါ၀င်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြသည့် ညီအကိုမောင်နှမ များကို #RakhineLivesMatter ဇာတ်လမ်းတို ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Facebook: https://facebook.com/Rakhine-Lives-Matter-108621157561378/?modal=admin_todo_tour Twitter : https://twitter.com/RakhineLives… Youtube : https://youtube.com/channel/UC7NcSnNcmV5_GWuFx7uLOJw… Wibsite : https://rakhinelivesmatter.wixsite.com/website… -4:56
🌸ရင်တွင်းဖြစ်🌸 🚦🚥 ဇာတ်လမ်းတိုအမှတ်စဉ် - ၄ 🎥 ကိုချစ်ဆွေ နှင့်ညီအကိုများမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ 🌷ပါ၀င်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြသည့် ညီအကိုမောင်နှမ များကို #RakhineLivesMatter ဇာတ်လမ်းတို ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Facebook: https://facebook.com/Rakhine-Lives-Matter-108621157561378/?modal=admin_todo_tour Twitter : https://twitter.com/RakhineLives… Youtube : https://youtube.com/channel/UC7NcSnNcmV5_GWuFx7uLOJw… Wibsite : https://rakhinelivesmatter.wixsite.com/website… -4:56
အေချင့်စော်ပုံပြင်မဟုတ် (This Is No Story)
🌸အေချင့်စော်ပုံပြင်မဟုတ် (This Is No Story) 🌸 🚦🚥 ဇာတ်လမ်းတိုအမှတ်စဉ် - ၃ 🎥 ကိုသန်းတင်အောင် နှင့်ညီအကိုများမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ 🌷ပါ၀င်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြသည့် ညီအကိုမောင်နှမ များကို #RakhineLivesMatter ဇာတ်လမ်းတို ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Facebook: https://facebook.com/Rakhine-Lives-Matter-108621157561378/?modal=admin_todo_tour Twitter : https://twitter.com/RakhineLives… Youtube : https://youtube.com/channel/UC7NcSnNcmV5_GWuFx7uLOJw… Wibsite : https://rakhinelivesmatter.wixsite.com/website…
🌸 စိတ်ဒါဏ်ရာ 🌸 🚦🚥 ဇာတ်လမ်းတိုအမှတ်စဉ် - ၂ 🎥 တေလာသွေးနှင့်ညီအကိုများမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ 🌷ပါ၀င်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြသည့် ညီအကိုမောင်နှမ များကို #RakhineLivesMatter ဇာတ်လမ်းတို ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Facebook: https://facebook.com/Rakhine-Lives-Matter-108621157561378/?modal=admin_todo_tour Twitter : https://twitter.com/RakhineLives… Youtube : https://youtube.com/channel/UC7NcSnNcmV5_GWuFx7uLOJw… Wibsite : https://rakhinelivesmatter.wixsite.com/website…
အိမ္ျပန္ခ်င္ေရ ဇာတ္လမ္းတိုအမွတ္စဥ္-၁ ကိုေမာင္ေဇာ္လင္းႏွင့္ညီအကိုမ်ားမွ ရိုက္ကူးတင္ဆက္သည္။ ပါ၀င္ရိုက္ကူးတင္ဆက္ၾကသည့္ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို #RakhineLivesMatter ဇာတ္လမ္းတို ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 🌸 အိမ်ပြန်ချင်ရေ 🌸 🚦🚥 ဇာတ်လမ်းတိုအမှတ်စဉ်-၁ 🎥 ကိုမောင်ဇော်လင်းနှင့်ညီအကိုများမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ 🌷ပါ၀င်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ကြသည့် ညီအကိုမောင်နှမ များကို #RakhineLivesMatter ဇာတ်လမ်းတို ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Contact Rakhine Lives Matter
©2020 by Rakhine Lives Matter. Proudly created with Wix.com